श्रीमतीले Malai किन chikna नदिएकी ?-यौनचाहना Most demanded - Indian Girls Nude XXX Images
श्रीमतीले Malai किन chikna नदिएकी ?-यौनचाहना Most demanded
मेरी श्रीमतीमा यौनचाहना बच्चा नहुँदा धेरै थियो। त्यतिबेला सातामा ५ दिन सेक्स हुन्थ्यो। हाल २ बच्चा भएको ५ वर्ष भयो र मेरी श्रीमती १ महिनामा २ पटक पनि सेक्स गर्न दिन्नन्। किन होला ?
श्रीमतीले किन नदिएकी ?
तपाईंले पहिलेको तुलनामा श्रीमतीसँगको यौन सम्पर्कमा कमी आएको र अहिले यौन सम्पर्क राख्न नदिएको कुराबाहेक अन्य जानकारी दिनुभएको छैन। सीमित जानकारी मात्र भएकाले महिलाहरूमा सामान्य रूपमा यस्तो हुने कारणहरू कै बारेमा चर्चा गरौं। तपाईंले आफ्नो उमेर पनि लेख्नुभएको छैन तर पनि छोटकरीमा के भनौं भने उमेर बढ्दै जाँदा, युवावस्थाको जस्तै रूपमा यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन नसक्ने स्थिति पुरुष तथा महिला दुवैमा आउन सक्छ। Aging (एजिङ्ग) अर्थात् समयको गति सँगै उमेर बढ्नु र त्यसका साथै शरीर अनि यसको कार्य सम्पादन क्षमतामा परिवर्तन हुनु सामान्य तथा निरन्तर भैरहने प्रक्रिया हो। यसको प्रभाव हाम्रो शरीरका सबै अङ्गप्रत्यङ्ग तथा कार्य क्षमता दुवैमा देखिन्छ। यौनसम्बन्धी कुरामा पनि यस्तो हुने नै भयो, तर यस विषयमा आवश्यक जानकारी राखेर आफूलाई तयार गरे ती परिवर्तनसँगै तालमेल मिलाउँदै जीवनयापन गर्न सजिलो हुन्छ।
उमेरसँगै आउने परिवर्तनको कुरा गर्दा पुरुष तथा महिलाका प्रजनन तथा यौन अङ्गका साथै कार्य क्षमतामा पनि आ-आफ्नै किसिमका परिवतर् नहरू हुन्छन्। महिलामा योनिरसमा कमी आउने वा चरमसुखको स्थितिमा पुग्दा तीव्रता नहुनेजस्ता कुरा देखिन सक्छन् भने पुरुषहरूमा लिङ्ग उत्तेजनामा कठिनाइ हुनेजस्ता कुरा देखिन्छन्। त्यसबाहेक कतिपय दीर्घरोग अनि त्यसका उपचार तथा अन्य समस्याको प्रभाव पनि यौन जीवनमा नकारात्मक रूपमा देखिन सक्छ। एलर्जी, रक्तचाप तथा मानसिक रोगको उपचारका क्रममा खाइने कतिपय औषधीको नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ। कुनै त्यस्तो औषधीको प्रयोग गर्नुभएको छ भने चिकित्सकसँग छलफल गर्नुहोस्। कतिपय स्थितिमा यदि महिलालाई गर्भ रहने भय छ भने यौन सम्पर्कबाट नै परहेज गर्ने स्थिति आउन सक्छ। बच्चा भएपछि यौन सम्पर्कमा रुचि नहुने कारण यौन सुख र सन्तान जन्माउनुबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ र बच्चा पाएकै कारणले दीर्घकालीन रूपमा यौनइच्छा हराउने होइन। गर्भावस्था र प्रसवको कुरालाई झेलेपछि पुरानै शारीरिक अवस्थामा र्फकन केही समय त लाग्छ नै। यतिबेला नै यौनभन्दा पनि अन्य कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। सामान्यतः यस्तै ६ सातामा महिलाको प्रजनन अङ्ग पुरानै अवस्थामा र्फकन्छ। नेपाली समाजमा बच्चा पाइसके पछि बच्चाको हेरचाह र घरायशी कार्यमा पुरुषलाई संलग्न गराउने चलन एकदम कम छ।
यस्तो स्थितिमा महिलाले बच्चाको हेरचाहमा पनि प्रशस्त समय तथा शक्ति खर्च गर्नुपर्छ। अन्य सहयोगीहरूको उपस्थिति नभए सुत्केरी महिलाले थकान र तनावको स्थिति झेल्दै बच्चा र घरको स्थिति सम्हाल्दा शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न सक्छ। यस्ता कुराको प्रभाव यौनसम्बन्धी कुरामा पनि पर्ने नै भयो। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, पहिलो बच्चा हुनुभन्दा पहिले श्रीमतीको सम्पूर्ण ध्यान र समय आफ्ना श्रीमान् कै हेरचाहमा दिन सक्ने स्थिति हुन्छ र यौनसम्बन्धी क्रियाकलापमा पनि संलग्न हुने पर्याप्त समय हुन सक्छ। बच्चा जन्मिए पछि ती कुराहरूमा स्वाभाविक रूपमै परिवर्तन आउँछ। दिनरात बच्चाको हेरचार गर्नु सजिलो कार्य होइन। यस्ता कुरा राम्रोसँग थाहा नहुँदा श्रीमान् र श्रीमतीको बीचमा अनावश्यक रूपमा असमझदारी उत्पन्न हुनसक्छ। श्रीमान्ले आफूलाई श्रीमतीले वास्ता नगरेको अनुभव पनि गर्न सक्छन्। त्यसैगरी श्रीमतीले आफ्नो परिस्थितिको सहयोगी हुनुको सट्टा यौन इच्छा शान्त पार्ने एक साधनमात्र लिइएको अनुभव गरे समस्या त पर्छ नै।
गर्भ निरोधको कुनै प्रभावकारी साधन प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने जानकारी पनि पत्रबाट प्राप्त भएन। दुईवटा बच्चापछि थप बच्चा नजन्माउने चाहना भएको स्थितिमा गर्भरहने भयले पनि कसैलाई यौनसम्पर्कबाट टाढा राख्न सक्छ। गर्भनिरोधको उपायले यौनसुखलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ। जे होस्, यस्ता कतै यस्तो परिस्थितीहरूमध्ये कुनै एक त होइन एकपल्ट विचार गरी उपाय गर्नु होला। थप कुरा तपाईंलाई थाहै होला, यौन उत्तेजना नै सुरु नहुनु वा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न बाधा पार्ने कुनै पनि कुराका शारीरिक, मानसिक वा दुवै कारण हुन सक्छन्। यस विषयमा पनि एकपल्ट विचार पुर्याउनुहोला। कुनै व्यक्ति भयका कारण यौनसम्पर्कमा संलग्न हुँदैन भने त्यसलाई sexual aversion भनिन्छ भने इच्छा नै नभै यौनसम्पर्क नराख्नुलाई Inhibited Sexual Desire भनिन्छ। यो अवस्थामा यौन क्रियाकलापमा संलग्नता पनि कम हुन्छ भने यौन क्रियाकलामा संलग्न हुने इच्छा पनि कम हुन्छ। यसरी इच्छा नै कम हुँदा यौन सपना (स्वप्नदोष), यौन परिकल्पना, यौन उत्तेजक कुराप्रति ध्यान वा आकषर् ण, यौन क्रियाकलाप प्रतिको चाहनाको सचेतनता, आकर्षण, सम्भावित यौन साथी देख्नु, यौन क्रियाकलाप गर्न नपाएकोमा हतास हुनेजस्ता कुरा पनि हुँदैनन् वा कम हुन्छन्।
यो अवस्थामा रुचि नै कम हुने भएकाले यौन क्रियाकलापको सुरुवात पनि नगर्ने हुन्छन् भने अर्काले सुरु गर्दा पनि त्यसलाई सजिलै स्वीकार गर्दैनन्। यी सबै भए पनि उनीहरू शारीरिक रूपमा यौन सम्पर्क राख्न सक्षम हुन्छन्। तपाईकी श्रीमतीको सन्दर्भमा त्यस्तो केही हो कि होइन भनेर निक्र्योल गर्न तपाईं बढी जानकारी राख्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक दैनिक जीवनमा आईपर्ने तनावहरू जस्तै चिन्ता, निराशा, थकाइ, तपाईंहरूबीचको (अन्तरव्यक्ति) सम्बन्धको चिसोपन तथा दम्पत्तीबीचको तनाव आदि यसका कारण हुन सक्छन्। यो तपाईंको पारिवारिक जीवनका अन्य कतिपय कुरासँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ। यदि त्यस्ता कुनै कारण भए पक्कै नै त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुहुनेछ। यौन मनोविज्ञान आजकाल म र मेरो श्रीमानबीच यौन सम्पर्कको समयमा झगडा हुन्छ। कारण मलाई यौन सम्र्पकको समयमा पीडा अनुभव हुन्छ। मलाई यौन रोग भएकाले यौन सम्पर्कको समयमा अत्यन्तै पीडा हुन्छ। उहाँ भने यसैलाई आधार बनाएर परपुरुषसँग सम्पर्क छ कि भन्ने शंका गर्नु हुन्छ।
के यौन रोग भएकाहरूले यौनको चरम आनन्द लिन सक्दैनन् ? स्मृति यौन सम्पर्कमा सावधानी अपनाउन नसक्दा मानिसहरू घातक रोगको सिकार हुन्छन्। यौन चेतनाको कमी तथा कहिलेकाँही यसमा असावधानी नअपनाउँदा धेरै मानिसहरू यौनजन्य रोगको शिकार भएका घट्ना हामी दिन प्रतिदिन सुनिरहेका हुन्छौं। एड्सलगायत अन्य यौनरोगहरू पहिले साधारण जस्तो लागेपनि पछि तिनले विकरालरूप लिएर मानिसको ज्यान लिएको तथ्यहरूले देखाएका छन। यसको भावनात्मक एवं मनोवै ज्ञानिक असरहरू पनि छन्।
यौन रोगहरू धेरैजसो पुरुषहरूबाट महिलामा संक्रमित भए पनि महिलाहरू नै यस्ता रोगबाट बढी प्रताडित हुने गरेका छन। यौन रोगका लक्षण पुरुषमा भन्दा महिलामा चाँडो देखिने भएकाले कोबाट रोग संक्रमित भएको हो भन्ने विषयमा पुरुष र महिलाबीच विवाद हुने गरेको छ। यस्ता घट्नाहरूमा पुरुषले महिलामाथि दोषारोपण गर्ने गरेको पाइन्छ। यो सही कुरा होइन। फेरि यौन रोगको उपचारबाट पनि पुरुषहरू पन्छिने गरेको हामी पाउँछौं। यौनरोग पुरुषबाट महिलामा संक्रमित भएको हुन सक्छ र महिलामा छिटो देखिएको हुन सक्छ। सँगसँगै पुरुषमा पनि संक्रमण भैसके पनि थाहा नभएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा दुवैले यौन रोगको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकजनाको मात्र उपचारले यौन रोग कहिल्यै निको नहुने हुन्छ। यो एकबाट अर्कोमा सरिरहने हुन्छ। जहाँसम्म यौनरोग भएको मानिसले यौन आनन्द लिने कुरा छ, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक हिसावले नै उनीहरूले यौन आनन्द लिन सक्दैनन्। जुनसुकै किसिमको यौनरोगले मानिसहरूलाई पीडा दिन्छ।
यस्तो रोग लागेको अवस्थामा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने भएकाले मानसिक तथा भावनात्मकरुपले हैरानीको अवस्थामा पुगिन्छ। पीडाको यस्तो अवस्थामा हुने यौनले कसरी आनन्द दिन सक्छ ? अर्को कुरा आफूमा यौन रोग छ भन्ने थाहा भैसकेपछि यौन सम्पर्कको अवस्थामा एकले अर्कोलाई त्यो रोग सारिरहेकोमा हिनताबोध हुन्छ। त्यसैले यो भावनात्मक तथा मनोबैज्ञानिक समस्या पनि हो। मानिसलाई यस्तो रोगले मूलतः दुई किसिमबाट असर गर्छ। यौन आनन्द लिने कुरा त के, रोग विस्तार हुँदै जाँदा यस्ता रोगले जीवन ढलाइदिने खतरा एकातिर छ भने अर्कातिर लामो समय उपचार नगरिँदा मनमा आउने नकारात्मक सोचले तत्कालको मनस्थिति बिगारी दिने मात्र होइन, दीर्घकालमा मनोवैज्ञानिक समस्याको रूप धारण गर्न पुग्छ र मानिस मनोवैज्ञानिक रूपले कमजोर भै गरिखान नसक्ने अवस्थामा पुग्छ।
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	November 13, 2014 admin	Posted in Most Demanded, Nepali SEX Stories	Post Permalink
← मेरो पुतिको प्वल ठुलो पारीदेउ- ऐय।।। मरे ममी भन्दै रुन थालिन्न्	सरदार जी का फोटो खीचनेका अलग अंदाज →